नर्भिकमा स्तन नकाटी क्यान्सरको उपचार - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ कर्पोरेट ∕ नर्भिकमा स्तन नकाटी क्यान्सरको उपचार
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७९ वैशाख १३ गते, १६:५५ मा प्रकाशित
काठमाडौं – स्तन क्यान्सरको उपचारको नाममा स्तनलाई काटेर फालिन्छ । तर, नेपालमा न्यून संख्याका क्यान्सर सर्जन यस्ता पनि छन्, जसले स्तन बचाएर क्यान्सरको सर्जरी गर्ने गर्छन्। र, सम्बन्धित बिरामीको रुप बिग्रिन दिंदैनन् । स्तन नहुँदाको आत्माविश्वास गुम्न दिंदैनन् ।
पछिल्लो समय स्तन क्यान्सरको उपचार(शल्यक्रिया) स्तन नफ्याली वा नकाटी समेत गर्ने चलन सुरु भएको छ। थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा पनि यो सेवा उपलब्ध छ। भारतका प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेर स्तन क्यान्सरको विषयमा खोज गरेकी नेपाली चिकित्सक तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डा. बानिरा कार्कीले नर्भिकमा स्तन क्यान्सर बिरामीका लागि अत्याधुनिक उपचार सेवा दिइरहेकी छिन् ।
डा कार्की भन्छिन्, ‘स्तन नकाटी शल्यक्रिया गर्दा पीडित महिलाहरुलाई सामाजिक रुपमा पुनरस्थापित गराउन सहज हुन्छ र उनीहरुको मनोविज्ञानमा समेत खासै ठूलो असर नगर्ने रहेछ। फिमेललाई साइक्लोजिकल ट्रमाबाट बचाउन सकिन्छ।’
डा. कार्की काठमाण्डौमा उपलब्ध एकमात्र महिला स्तन क्यान्सर विशेषज्ञ तथा सर्जन पनि हुन् ।
महिला सर्जनबाटै महिलाहरुको स्तन क्यान्सरको शल्यक्रिया सेवा केही सहज हुने हुँदा डा. कार्कीसँग सेवा लिनेहरु पछिल्लो समय बढिरहेका छन् ।
डा. कार्कीले हाल नर्भिक अस्पतालमा प्रत्येक हप्ताको सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म २ घण्टा स्तन क्यान्सर महिलाहरुलाई लक्षित गरी ओपिडी सेवा दिइरहेकी छिन् । त्यसबाहेक स्तन क्यान्सरको सर्जरी सेवा पनि उनले दिइरहेकी छिन् ।
‘अहिलेसम्मको अध्ययनको निष्कर्ष हेर्दा महिलाहरुले लाज, धक र डर तथा पुरुष डाक्टर भएकै कारण समयमै ब्रेस्ट क्यान्सरको लक्षणको विषयमा बताउन चाहदैनन्,’ डा. कार्की भन्छिन्, ‘तर सर्जन पनि महिला नै हुँदा क्यान्सरबाट पीडित महिलाहरुले समयमै आफ्नो समस्या बताउन सक्छन्, समयमै थाहा भयो भने स्तन क्यान्सरको उपचार सम्भव छ।’
पछिल्लो समय स्तन क्यान्सरको उपचार(शल्यक्रिया) स्तन नफ्याली वा नकाटी समेत गर्ने चलन सुरु भएको छ, नर्भिकमा पनि यो सेवा उपलब्ध हुन्छ। डा कार्की भन्छिन्, ‘स्तन नकाटी शल्यक्रिया गर्दा पीडित महिलाहरुलाई सामाजिक रुपमा पुनरस्थापित गराउन सहज हुन्छ र उनीहरुको मनोविज्ञानमा समेत खासै ठूलो असर नगर्ने रहेछ। फिमेललाई साइक्लोजिकल ट्रमाबाट बचाउन सकिन्छ।’
डा कार्कीले भारत टाटा मेडिकल सेन्टर लगायतका प्रतिष्ठित संस्थाहरुमा ब्रेस्ट क्यान्सर विषयमै फेलोसिप गर्दा ७०० हाराहारी महिलाहरुको शल्यक्रिया गरेकी छिन्। उनीसँग जनरल ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनको रुपमा धुलिखेल अस्पताल लगायतमा समेत काम गरेको अनुभव छ।
क्यान्सरसँग सम्बन्धित सबै खालका सेवाहरु निकट भविष्यमै उपलब्ध गराउने नर्भिक अस्पतालको योजना रहेको छ ।